izilwane waseRussia esinesihlungu kakhulu - ke izicabucabu karakurt, amaxoxo, Toads umlilo-bellied, nawofezela Yiqiniso, izinyoka ezinesihlungu - yezinyoka. Indawo yokusabalalisa yabo futhi kwendawo yemvelo - ezifundazweni eziseningizimu ye ezweni lethu. Izinto eziza kuqala.
Lona inyoka ezivamile ezonini phakathi ezweni lethu, kodwa hhayi okubi kakhulu ukuba umuntu. Ngokuvamile, lezi zidalwa ezitholakala e-Afrika, e-Asia naseYurophu. Lezi zinyoka baye eligoqiwe lonke legend. share sengonyama wabo - i eqanjiwe ngokuphelele. Ngokwesibonelo, abantu bakholelwa ukuthi Ubuthi yezinyoka kweso obulala indoda. Lokhu akulona ngempela kuyiqiniso.
Empeleni, akuzona zonke yezinyoka kukhona ezithusayo, engozini enkulu abantu iyona enkulu kunazo zonke zazo - lenyoka. Lokho-ke kubhekwa kokulunywa ebulalayo ngokuqinisekile, iluma abanye yezinyoka ophilayo ensimini ka-Russia, zingase zihlanzwe, uma isikhathi ukujova ikhambi - a serum ekhethekile.
Ukuthi baziphathe kanjani uma behlangana enesihlungu?
Uma ngengozi wahlangana enesihlungu, you behave ngomoya ophansi, ungamenzi ukuqubuka ngisho ukunyakaza kungazelelwe ngaphezulu. Uma kungenjalo, ungase liyochukuluza inyoka ukuba izinyathelo zokuzivikela. Viper Sting imbangela ngempela ubuhlungu, futhi endaweni ethintekile siyakhukhumala kakhulu ngemizuzwana. I esiyingozi kakhulu kukhona ukulunywa e esifundeni entanyeni UBUSO bomuntu.
I inyoka enesihlungu kakhulu eRussia
Ukukhuluma ngalokho izilwane ezinesihlungu bazohlala eRussia, akunakwenzeka ukutshela ngaphandle enesihlungu. Lona uhlobo izinyoka ezinesihlungu, emelela uhlobo yezinyoka giant umndeni eponymous. Umyalo wesibili igama layo - enesihlungu Levant. Ngokungafani "nozakwethu" yakhe - cobra, enesihlungu neze waxwayisa kusondela umuntu kuso. Washeshe iqala okuzivikela, ngakho izimo zabantu yenhlwathi lezi zinyoka akazange abone isixuku nje yisilwane cobra efanayo.
Njengoba sekushiwo, lenyoka - ummeleli elikhulu enesihlungu izinyoka ezihlala WaseRussia. Ubukhulu balo umxhwele: ubude umzimba lesidalwa up 2 metres, kanye nesisindo - 3 ngamakhilogremu! Lezi zidalwa zitholakala ezindaweni ezihlukahlukene: gornostepnyh, ehlane futhi ephuma kabili desert izindawo. Lezi zilwane asele yezinyoka uncamela ukubaleka kusengaphambili, ukuthi kungukuthi ukuza. Lezi zihlanganisa lokhu okulandelayo:
I enobuthi kakhulu izicabucabu Russia
Uma sikhuluma ngalokho izilwane enobuthi kakhulu eRussia basenza awanakuziziba izidalwa spider - okungukuthi, ezinobuthi Black Widow. Kuyinto kuphela Russian spider Ukulunywa amelela a usengozini ofayo kithi. Karakurt siphile, kanye nezinye izilwane eziningi ezinobuthi eningizimu: e-Astrakhan, ku Orenburg esifundeni, North-Caucasus, eCrimea. Okwamanje, amacala ukuhlaselwa UMFELOKAZI ayethe njó abantu abahlala emaphethelweni edolobha.
ubungako bawo, uma ungangemuki ku-akhawunti ubude imilenze ukuhamba, ukufinyelela ubude 2 ngamasentimitha. Umbala ithole lezi zidalwa - kungenzeka Black, kwi esiswini esikhulu akhiwe izindawo eliqhakazile obomvu noma orange. Kuyaphawuleka ukuthi karakurt asikwazi ukuba lezi izindawo emzimbeni wakho. Qaphela! Lokho nabesifazane yalezi izicabucabu ezibhekwa olukhulu kubantu. abesilisa Small UMFELOKAZI - ababuthakathaka futhi ubuthaka, abakwazi ngisho bakulume ngokusebenzisa ungqimba phezulu kwesikhumba womuntu.
Isici esiphawula leli Black Widow
Isici esiyinhloko lomehluko izidalwa anobuthi neminye arachnids congeners kuyinto indawo encane okhanyayo esisogwini underside esiswini yabo. Uma ubuka it eduze, uzobona into olufana hourglass. Qaphela ukuthi kule ndawo ngokuvamile kungenziwa zaveza hhayi imibala okhanyayo 'iyezwakala.
isithombe ubuthi ushevu karakurt
Ukulunywa kuhambisana ovuthayo ubuhlungu, esakaza emaminithi la-20 wonke umzimba. Ubuhlungu kungenzeka wazizwa lumbar ndawo, esiswini nasesifubeni. ukungezwani Isici amadlingozi imisipha besisu. Umuntu bangezwa zimpawu ezilandelayo ezivame:
alibale ukuchama futhi sokuzikhulula.
Yiziphi izilwane ezinesihlungu bukhoma eRussia okwamanje?
Omunye izilwane enobuthi kakhulu abahlala ezweni lethu yilona uhlobo lolwembu olunesihlungu South Russian noma Mizgir. Lolu hlobo izicabucabu, emelela ozala impisi izicabucabu. Njengazo zonke izihlobo walo onoshevu, yena uhlala eningizimu yezwe. Ngenhlanhla, ukulunywa yakhe ayiwona yingozi abantu, nakuba bamele ingozi. Bite Mizgir ukhumbuza Udosi iminyovu.
Uyini uhlobo lolwembu olunesihlungu South Russian?
Ubukhulu yalezi zidalwa lingafika 3 amasentimitha azalela kanye 2.5 amasentimitha - kwabesilisa. umzimba wabo ezinabantu embozwe izinwele umbala sinombala-ezimnyama phezulu - phansi. Lesi sidalwa ukhetha ezomile, ngakho ngokuvamile uhlala asemaqeleni, asemaqeleni, ugwadule ezithi azibe ehlane. Zisakazwa Central Asia naseSiberia.
Uma sikhuluma onjani izilwane ezinesihlungu bazohlala eRussia, kufanele nawofezela kuphawulwe. nawofezela ezinesihlungu bahlale Daghestan kanye Lower iVolga esifundeni ezweni lethu. Ngenhlanhla abantu, lezi zidalwa ehlasela kuphela ezivikela. Kuyaphawuleka ukuthi lezi zidalwa - mancane, kodwa Umphikisi ayakufanelekela. Njengoba yaziwa, nesihlungu sezilwane scorpion ivuliwe yomsila yakhe.
Njengoba sekuphawuliwe kakade, laba bantu ezinesihlungu izilwane (egameni lesiLatini ubunjalo nawofezela ezinesihlungu izidalwa abanye okuxoxwe ngazo kulesi sihloko, engashiwongo) kuphela ukuhlasela ezivikela, uzama ngokushesha ukubaleka. Nokho, uma bonke ezindleleni ukubaleka anqunywe, nawofezela uqale ngokuphuthumayo ukuvikela. Njengoba kunjalo nge Black Widow, kuyingozi ngokukhethekile phakathi kwalezi zilwane nabesifazane nje, ngoba Isihlungu sabo kungaba yingozi.
Isihlungu lezi zidalwa ukubunjwa yayo iqukethe izinto ongabhubhisa egazi (erythrocyte, leukocyte, izinhlayiya zegazi) futhi zibulale isimiso sezinzwa somzimba womuntu. esiyingozi nakakhulu ushevu skorpionchiki abasha. Abantu nokukhanya anemibala, abe ushevu kuhle eqinile, nawofezela zipendwe ngemibala amnyama, ngokuphambene, abe ushevu ababuthakathaka. Lo mqeqeshi owake wapheka ngokuvamile zitholakala ezindaweni eziwugwadule yezwe, kanti eyesibili - in the ezinamahlathi.
Kunzima ukukholelwa, kodwa lezi zinambuzane ngezikhathi kufakwe eziphezulu ezingu-10 nezilwane ezinobuthi kakhulu ezweni lethu. Futhi akukho ngozi! Iqiniso lokuthi ezinyosi zabo siqu noma iminyovu abalona usengozini ofayo ukuba abantu: bite yomzimba wesinambuzane kungaba ngenye kubangele komzimba kuphela, engenabungozi empilweni yethu. izinyosi Nokho okubulalayo noma iminyovu, okuholela usayizi amaningi, isibonelo, uma umuntu kwabacasula kanyekanye uswebezane lezi zinambuzane zingase ziholele ekufeni.
enobuthi Toads umlilo-bellied
Kanti ezinye izilwane enobuthi (isithombe okusesihlokweni esithi), abahlala endaweni Russian Federation - Ukhala ezinesihlungu Bombina. Okwedlula lapho betholakala khona kule Krasnodar esifundeni. Kusukela izihlobo ayo engenabungozi banalo esiswini elikhanyayo kakhulu olintshi amnyama. umzimba wabo obuphelele ingeqi 7 cm umsele sokuzwa Awekho eardrums, futhi iso abafundi babe ukuma esingunxantathu.
Swimming ulwelwesi kunokufana okungaka phakathi kwezinceku izinzwani ngezidladla indluzelekazi kuphela. Ngokuvamile, lezi ezinesihlungu amaxoxo isikhumba has a isakhiwo esingemnandi kanye off-luhlaza (ngezinye izikhathi - grey sinombala) umbala. Lezi zidalwa abakhuthele emini, ebusuku - ubuthongo. Winter Toads umlilo-bellied awekho amanzi futhi liqhube imisebenzi yezolimo, bangazihluphi emgodini, emgodini noma ukulungiswa. Kusukela izilwane ezidla ezinye lezi amaxoxo ushevu silondoloza uketshezi frothy ekhiqizwa nezindlala isikhumba, futhi-ke, isixwayiso ezinemibala egqamile.
Toads Fire-bellied ushevu isehlane by isikhumba ayo, ngokoqobo enenhlamba nezindlala esinesihlungu. Njengoba sekushiwo, it has a isakhiwo Foam. Ngemva contact we isikhwehlela ezinesihlungu iyiphi ulwelwesi womuntu lwamafinyila kukhona ubuhlungu ezithile, evutha. Kwezinye izimo, umuntu ngokuzumayo ehlanganiswa Ukugodola nekucala uthole ikhanda.
izilwane eziyingozi eCrimea
indawo YaseCrimea uhlalwe izicabucabu ezinesihlungu izinyoka, isibonelo asemaqeleni enesihlungu noma karakurt izibungu, okuyinto bona ngifuna umuntu. Uma yezinyoka futhi karakurt thina esiphethweni ngenhla, we isango Sisalokhu ezingenakuqondakala obungazazi. Isici esiphawulekayo lezi zidalwa spider wukuthi, ngokungafani kuya izinyoka ezinesihlungu, izicabucabu noma ezinye izinambuzane, ehlasela abantu ngowokuqala!
Iyini ingozi ye izibungu YaseCrimea?
umonakalo wabo ukuthi lezi arachnids izilwane okuthwala yingozi kithi izifo ezifana encephalitis ezithwalwa futhi isifo saseLyme. Ngokuvamile, kokutshelwa ngokukhubazeka kwengane senziwa odokotela sezigcwalisekile, ngoba abantu kuze kube ngomzuzu wokugcina, uJobe wayengazi ukuthi bite yabo ye-umkhaza itheleleke.
Ngakho, kulesi sihloko sakhuluma ngalokho izilwane ezinesihlungu bazohlala eRussia. Ekuphetheni, ngingathanda yazi kafushane ngokwakho nanoma yimuphi izidalwa ezinesihlungu abahlala eduzane Nathi-Ukraine.
izilwane eziyingozi e-Ukraine
Ngomqondo onabile, inkulumo endaweni omakhelwane bethu atholakala yonke izinyoka efanayo ezinesihlungu izicabucabu. Omunye kunazo yesiteleka salezi zidalwa kuyinto isicabucabu uhlobo lolwembu olunesihlungu. Njengoba eRussia, izicabucabu karakurt atholakala e-Ukraine, lapho sishilo ngenhla. Enye Ukrainian vosmilapy nomzingeli ezinobuthi - kungcono Spider-argiopa. Ibid uhlala futhi enesihlungu. Ngokuvamile, izilwane ezinesihlungu Ukraine musa ihluke nozakwabo waseRussia.
Thina ababuka lezi zinyoni ukulungiselela ubusika
I ejwayelekile omele kakhulu ye izitshalo-Australia - Igolide ngomuthi noma mimosa
Holiday dolobhana "Ubungane" e Krasnoyarsk
Okuphakelayo for Yorkshire Terriers. ukudla York
Kokusebenza kanye yokupaka (SDA). Imisa kanye yokupaka izimoto
Kuyini Improvisation? Amafomu, izindlela lasetjentiswako Improvisation